PHYTOPHTHORA ON BARADHO: SIDA LOO WAJAHO CUDUR FUNGAL AH - BARADHADA
Marka lagu daro cayayaanka, beeraha baradhada ayaa sidoo kale waxaa soo food saaray cuduro kala duwan. Qaar ka mid ah jirrooyinka ayaa noqdey mid aad u xasilloon sannadihii la soo dhaafay, tani waxay keenaysaa welwel ka dhex jira beeraleyda. Dhanka kale, ma jirto sabab argagax leh - haddii aad ogtahay sida phytophthora ay u muujinayso barandhada iyo sida loo dagaalamo, waxaad badbaadin kartaa goosashada.
Sababaha iyo astaamaha cudurka
Wakiilka keena cudurku waa pathogen oo isku mid ah. Waxay ka mid tahay fangaska hoose (oomycetes).
Cudurku wuxuu ku faafaa xayawaanka, kaas oo laga dhaqo dhulka qaybta geedka iyo iyada oo loo marayo xididada ciidda oo hoos u dhiga dabeesha ama digriiga. Muddada kabuubintu waa 3 ilaa 16 maalmood. On carrada daciif ah ama in ay joogaan microorganisms ee wax beerto, fungus sii socdo si dhakhso ah, 3-4 maalmood.
Digriiga inta badan ku jiran inta lagu jiro goosashada. Haddii bukaanka bukaanka ah ee taabashada indhahooda, qayb ka mid ah dalagga ayaa dhiman kara. Iyada oo la jeexayo, khatartaas ayaa si weyn u kordheysa.
Waa muhiim! Qodobka muhiimka ah ee kahortagga waa isbedel dalag. Haddii dalagyo isku mid ah oo qura ay u koraan isla goobta sannad ilaa sanadka, ciidda waa inay noqotaa mid la miiro dareeraha Bordeaux.
Phytophthora sida miro-faleeb wuxuu jecel yahay qoyaan badan. Maalmo yar oo roobab ah heerkulkiisu yahay 15 ilaa 25 ° C waa xaalado ku haboon. Beerta cuncunku waxay kor u qaadaa waxtarka: markaa xitaa xitaa dhar dhooban ayaa ku filan. Xilliga hawada kulul, cudurkan wuu joojiyaa si uu u kobco, laakiin tani ma fududa dhirta.
Gobolada intooda badan, waxaa suurtagal ah in la arko dhaawacyada ciladaha ee asliga ah ama caleemaha barafka ee qeybta labaad ee xagaaga, inkastoo gobollada koonfureed ee noocyada hore ee roobabka bisha June ay ku filanyihiin.
Khatarta ayaa ah in xitaa dhowr ka duurka khatarta phytospore ee 1.5-2 todobaad ku faafi karaan dhammaan beeraha, iyo haddii aan la qaadin tallaabooyin, ka dibna 17-20 maalmood dhirta ku dhinta.
Cirridka dabiiciga ah waa cudur halis u ah qoyska Solanaceae oo dhan: yaanyada, ukunta, basbaaska. Intaa waxaa dheer, cudurkani wuxuu saameeyaa strawberries, raspberries, saliidda castor, buckwheat.
Aqoonsiga saameynta fangasku waxay noqon kartaa sababaha soo socda:
dhibco muuqan on cidhifyada caleemaha, kuwaas oo si dhakhso ah u soo jeedin brown iyo korodhka size;
calaamada cad ayaa lagu arki doonaa saxanka hoose ee xaashida - tani waa khilaafka;
cimilada roobka ayaa laga yaabaa in la jarjaro;
on digriiga waxyeellada leh, lebbiska cagaaran ayaa si cad loo calaamadeeyay, kuwaas oo sidoo kale bilaabaya inay helaan midab madow. Waxay markiiba ku adkaadaan oo ay u kocdaan uur-jiifka. Haddii aad baratay baradho, waxay u muuqataa in ay tahay "rusty."
Ogaanshaha waxa saameynaya phytophthora, aynu aragno sida looga hortago.
Ma taqaanaa? Qaybo ka mid ah Koonfurta Ameerika, weli wali baradho duurjoog ah. Run, ma fiicna cuntada, sida digriiga waxaa ku jira xeryoyo solanin ah.
Sida loo sameeyo daaweynta (kiimikooyinka)
Si loo hubiyo beergooyska, waa inay ku hawlan tahay ka hortagga abuurka, beerashada iyo beeraha.
Waxa ugu muhiimsan waa in la isticmaalo ciidda si fiican loo ilaaliyo iyo baradho caafimaad leh oo beerto.
Sida ciidda, waa suurad wacan in la doorto degaan guri. Dhulka dooxada ma shaqeyn doono - meelo leh raasamaal ballaaran oo qoyaan ah, maadaama aan xusuusto, ayaa ah halis ah. Dhulku waa in uu iftiin iyo nuugo, iyo dheecaan caadi ah waa in la bixiyaa.
Xusuusin waxa ku kordhay goobta hore - dalagyada xilliga qaboobaha, xididdo, xayawaan, hadhuudh iyo geedo daaqsimeed ah ayaa noqon doona kuwii ugu wanaagsanaa ee ugu horreeyay. Kuwa "deriska" ugu fiican waxay noqon doonaan dabayl ama garbane, laakiin basbaaska, ukunta iyo habeenkii kale ayaa si fiican loo ilaaliyaa.
Waa muhiim! Waxaa la rumeysan yahay in dhaxan daran ku dhuftaan phytophthora ee ciidda. Nasiib darro, cudurkan ayaa si tartiib ah u habaynaya shuruudaheenna. - Tusaale ahaan, gobollada koonfureed, jiilaalku maaha mid aad u baqaya isaga, waana suurad wacan in la fuliyo beeraha ilaa xilliga dayrta.
Dagaalka ka dhanka ah baradho barafku wuxuu bilaabmaa xitaa kahor intey beerayaan dhulka oo marka ugu horeysa soo dego si loo doorto digriiga caafimaad qaba. Si fudud u hubi: muddo 2 toddobaad ah, baradhada hawada lagu kululeeyo hawada furan 15-18 ° C. Horeba marxaladdan calaamadaha ugu horreeya sida dhibcaha ayaa la arki doonaa. Maqaalkani waa ka wanaagsan yahay in la dhigo ama la iska tuuro.
Mustaqbalka Ka hortagga waxaa ka mid ah tallaabooyinka noocaas ah:
Daaweynta asaasiga ah ee leh xeryaha potassium-fosfooraska ee qiyaasta sare. Isla mar ahaantaana, xooga saaridda xeryahooda potassium ayaa labanlaabmaa, halka diyaarinta fosfoorada 1.5 jeer ka badan kan caadiga ah.
Beerta qoto-dheer "abuur" baradho iyo hilling baadiyaha yar yar.
Grooves ku shub tuubada, ma aha "dhibic".
Nadiifinta dhirta xanuunka sii koraya goobta.
Qaar badan oo ku saabsan hal usbuuc ka hor inta aanad qaadin kaliya dushooda. Run, xitaa duurka xooggan waa mid naxdin leh, mana aha wax qiimo jaban oo nadiifin ah.
Dalagyo goos goos ah oo qorrax leh oo qoyan. Qoyaanka oo kaliya "gacanta" fungus waxyeello leh.
Dareemidda dambe ee marxaladda firfircoon looma daaweyn karo. Tani waa run, laakiin diiradda cudurka ayaa had iyo jeer noqon kara "degaan", oo aan u oggolaanin khilaafaadka in ay ku faafaan baadiyaha caafimaadka qaba. Xalalka iyo diyaargarasyada kala duwan ayaa arrintan ka caawiya.
Ma taqaanaa? Qarnigii XVIII, baradhada waxaa loo tixgeliyey "apple earth". Sanadkii 1758, Akademiyada sayniska ee St. Petersburg xitaa daabacday maqaal u gaar ah beeritaanka, iyo waxaa jira tilmaam noocaas ah.
Ka dib markaad beerto, sugto dushooda si ay u koraan ilaa 25-30 cm Tani waa waqtiga ugu fiican ee daaweynta ugu horeysa. Koorsada waa qalabka "nidaamka warshadaha" sida "Ridomila".
Just ka hor inta ubax lagu buufiyo "Appin". Noocyo u adkeysanaya cimilada diiran oo aan roobab lahayn, Immunocytophate, Silk iyo Krezacin ayaa ku habboon. Haddii uu cudurku weli muuqanayo, qaado "Ridomil" (MC ama "Gold"), iyo sidoo kale "Oxy". Wixii ugu fiican ee daaweynta, daaweynta waxaa lagu soo celiyaa ka dib 1.5-2 usbuuc (laakiin had iyo jeer ka hor ubax).
Ka dib 8-14 maalmood ka dib si taxadar leh u baaro duurka. Haddii halista cudurku uu sarreeyo, qaado fungicides xoog leh sida "Ditan", "Revus", "Skor", "Efal". Si looga hortago (haddii aysan jirin wax cudur ah), waxay isku dhafan yihiin kala badh. Waa in la ogaadaa in daawooyinka ay tahay in ay la xiriiraan - fisigaha nidaamka daaweynta phytophthora si dhakhso ah loo isticmaalo.
Ka dib markii ubax, "Bravo" waa mid ku habboon, kaas oo loo isticmaalo daaweynta duurka oo leh mudo ah 7-10 maalmood. Sida for digriiga, waxay ka caawisaa iyaga "Alufit."
Waa muhiim! Dabayaaqadii bishii Luulyo iyo Agoosto, sariiraha fiidkii ayaa lagu dabooli karaa agrofibre, marka laga reebo dharabtu way soo baxday. Waxyaabahan waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo roobka, taas oo u adeegta "xajin" oo loogu talagalay phytophthora.
Roob, isla markiiba ka dib marka la buufiyo, waxay yareyneysaa dadaalladan oo dhan wax aan waxba ahayn, markaa waa inaad sameysid soo noqnoqod.
Marka lagu daro xeryahooda, waxaa jira sidoo kale kiciyaasha kobaca ee kordhiya caabbinta duurka. Marka, 15 litir oo biyo ah, waxaad qaadan kartaa 150 ml oo ah "Oksigumat" ama 5 ml "Ecosila".
Waxaad ku baran kartaa baradhada siyaabo kala duwan: laga bilaabo miraha, ka hor xilliga qaboobaha, hoostiisa. Sidoo kale tiknoolojiga beeraha baradhada Dutch waa mid caan ah.
Noocyada bulshada ee halganka
Bannaanka u badani waxay isku dayaan in ay u dardaraan duurka iyagoo leh kiimikooyin awood leh, oo u adeegsada cuntooyinka caanka ah. Kuwa ugu waxtarka badan ayaa ah:
Soo saarka beerka. 100 g oo ah toonta la jarjaray waxaa lagu daraa 10 litir oo biyo ah, ka dibna loo oggol yahay inay istaagto maalin. Dabadeedna dareeraha waa la jajabiyaa waxaana loo isticmaalaa buufinta. Koorso buuxda - bil ah, oo dhexdhexaad ah aan ka badnayn todobaad (taas oo ah, 4 wajahi).
Copper sulfate waxaa lagu qasi jiray biyaha (2 g 10 l) oo lagu buufin karaa mudo ah 10 maalmood.
Ma aha mid ka liita isaga iyo xal daciif ah ee kaneecada, boric acid iyo fitamiin. 3.3 litir oo biyo ah karkaraya weelasha shakhsiga ah waxay qaadataa walxo ka mid ah maaddooyinkaas. U ogolow isku darka inuu qaboojiyo, dhammaantood ku shubay weel 10 litir ah. Daaweynta waxaa la sameeyaa laba jeer, dhammaadka bisha Luulyo - ugu horreeya August (oo leh fasax 7-10 maalmood).
Sidoo kale, 10 g oo biyo ah ayaa sameyn kara 20 g oo ah naxaas sulfate ah.
Dareeraha Bordeaux. At 5 litir oo biyo diirran qaadan 100 g oo ah naxaas sulfate ah. Kontarool gaar ah, sicir-barar ayaa loo diyaariyaa isla saamiga, kadibna wax waliba waa "isku dhafan". Tani waa daaweyn caalami ah oo ku haboon dhamaan dhaqamada sida qiyaas ka hortag ah.
Oxychloride Copper waxay caawin doontaa - 60 g baaldi 15 l. Ku-buufinta noocan oo kale ah waxaa lagu sameeyaa 3-4 waji, oo leh farqiga ugu sarreeya toddobaad.
Soodhaha ayaa sidoo kale ka caawiya ka takhaluska phytophthora. Waa qayb ka mid ah fungicide-ka guriga. Qaadida 1 qaado oo ah soodhaha iyo 3 qaado oo saliidda cuntada ah, waxa lagu kala diraa 5 litir oo biyo ah, ka dibna ku dar 1 qaado oo ah saabuunta dareeraha. Dhammaan tan waa isku dhafan oo isla markiiba waydiisatay goobta.
Ma taqaanaa? Dalagga doolka ah lama isla markiiba lagu dhaqmin Ruushka - Go'aanka maamulka oo kordhinaya abuurka baradho ee bartamihii qarnigii XIX, ruxruxo "rabshad baradho" ayaa waddanka soo gashay. Laakiin si tartiib ah ayay u adeegsadeen, iyo bilowgii qarnigii labaatanaad, baradho ayaa loo yaqaan "kibis labaad".
Waxaad la dagaalami kartaa cudurkan adigoo kaashanaya "caano dhanaan": 1 l oo kefir cake ah ayaa lagu shubay biyo (10 l), kiciyey kuna adkaystay 3-4 saacadood. Ka dib markaad isku dhufato isku dar ah waa diyaar. Isticmaal wixi isbuuc ah ilaa fasaxyada iyo lakabka la waayo.
Waa muhiim! Si looga fogaado hawada sare, dabaqyada miiska waxaa lagu daboolay quraarado ama dhagaxyo. Laakiin claydite ma siin saameyn sida.
Qaar ka mid ah jimicsiga mulching, laakiin shaqadan waqti-qaadashada waxay u baahan tahay joogitaanka joogtada ah ee dacha: haddii goobta lagu soo booqdo 1-2 jeer toddobaadkii, markaa ma jiro macne gaar ah (waa in la daboolo maalin kasta ka dib marka dhoobo ayaa la waayay). Waxaa fiican inaad ku rusheeyaa jeexjeexyada si siman leh lakabka khafiifka ah ee lime - 1 mm waxay noqon doontaa ku filan.
Waa kuwa ugu adkaysi u kala duwan ee cayayaanka dabaylo goor dambe
Xitaa ka hor inta doorashada ee wax beerto waxay ka fiican tahay dooran baradhada ku haboon. Waxaa jira hal shay: mid ka mid ah noocyada ayaa leh damaanad buuxda oo ah ilaalinta - khadadka kala duwan waxeey ku kala duwan yihiin iska caabinta cudurka. Dabcan, waxaan u baahanahay kuwa ugu adkeysanaya. Kuwani waa noocyo:
"Nevsky" - digriiga wabiga ah oo leh nadiif cad "gut" waa mid ku habboon suxuunta kala duwan;
"Spring" waa midka ugu wanaagsan ee noocyo badan oo hore ah oo hore u leh difaaca wanaagsan iyo dhadhanka;
"Nasiib wacan" - khadadka bartamihii xilli-ciyaareedka, kaas oo haysta nolol shub ah oo aan luminin tayadiisa;
"Scarlett Red" - khudradda caleemaha cas ee dheeraa waxay ku dhowdahay tallaabada phytophthora oo si wanaagsan loo ilaaliyo.
Noocyada kale waxaa lagama maarmaan ah in lagu tilmaamo line-upyada "Tomic", "Sante", "Visa", "Rosara", "Verb" iyo "Arina". Waxay sidoo kale ka hortagaan ficilka fangaska si aad u fiican, laakiin cudurku wuxuu u muuqan karaa siyaabo kala duwan: qaar ayaa leh afkoda, kuwa kale waxay leeyihiin infekshanka kaliya ee digriiga.
Ma taqaanaa? Baradhada waxaa lagu magacaabaa dhaqanka xayawaanka. Sannadkii 1995, waxay noqotay noocyada "beerta" ugu horreysa, oo koray xuddunta.
Marka la eego, noocyada hore waxaa loo tixgeliyaa faa'iido badan: phytophtora si fudud uma hayso waqti ay u bislaadaan, dalagga waxaa laga saari karaa iyada oo aan wax khasaare ah haysan. Iyada oo la beero beerta ka dib waxaa jira shaqooyin badan, gaar ahaan marxalado cusub oo aan caadi ahayn oo muuqda xilli kasta.
Xeerarka kaydinta baradhada
Goostay cimilada qallalan, baradhada ayaa la qalajiyaa lana kala soocaa. Fasaxyada oo idil adigoon hirgelin. Xaaladdan oo kale, digriiga waxyeello ayaa si gooni ah loo dhigaa, waa in la tuuraa.
Inta badan, baradhada waxaa lagu kaydiyaa Qeybta hoose. Waxaa jira, waa suurad wacan in la sameeyo nadiifinta, oo fiiro gaar ah u ah digriiga hore iyo geeddi socodka - baradhada cudurka qaba waxay noqon doontaa deris xun oo ah dalagga cusub. Maqooska laftiisa waa inuu ahaadaa mid hawo wanaagsan leh.
Waa in aanad dayacin xitaa darbiga, gaar ahaan tan ay fududahay in la sameeyo: kaliya qaado 10 litir oo biyo ah, 2 kg lime lakulma iyo 1 kg oo ah sulfate copper - iyo waliba isku darka waa diyaar. Qaar waxay kaloo ku daraan 150 g oo ah cusbo joogto ah.
Waa muhiim! Si aad u badbaadiso dalagga, isku day inaadan xumayn nalalka. Iftiinka wuxuu iftiiminayaa soosaarka sunta sunta leh ee xididdada.
Maqnaansho muhiim ah waa doorka weelka. Xaaladaha badankood, kuwani waa sanduuqyo. Waxay la qalajiyey, waxay noqon doontaa mid wax ku ool ah oo ka shaqeynaya daloolka potassium. Sanduuqyada la buuxiyey waxaa loo qaabeeyey si loo kala dhexgalo 10 cm, iyo ilaa 25 cm derbiga.Waxaa la dhigaa yar yar (20-25 cm) oo ah kor looxyo ama lebenyo, laakiin sidaas darteed meel bannaan saqafka. Sawirro dhagoole ma taagnaan doonaan: inta u dhexeysa dalxiisyada aad u baahan tahay farqiga hawo qaadashada 2-3 cm.
Grids, marka hore, bixiyaan hawo, iyo burlap xajisto kulaylka.
Inta lagu jiro kaydinta, isku day inaad raacdo sharciyadan:
rinjiga muddada dheer ee dhaxanta; cawska ugu fiican, laakiin dhar kulul oo gaboobay ayaa sidoo kale ku haboon;
kormeerka marxalad ee weelka iyo baradhada lafteeda;
waa inay suura gal u noqotaa in sanduuqyada ay u dhowaadaan guga (tuubooyinka) (inta badan biyaha ayaa u galaan dhulka hoostiisa, taas oo keenaysa dhimashada dalagyada xididka ah).
Farsamada keydinta dabacsan (ee xargaha) waxaa loo isticmaalaa si yar. Haa, tani waa hab sahlan - sanduuqyo lahayn, ku shubay lakab ah 1-1.5 m wax walbana waa muuqataa. Laakiin si loo xakameeyo gobolka baradho ee kiiskan waa adag yahay: waa inaad leexisaa lakabka oo dhan. Intaa waxaa dheer, iyada oo kaydinta sida, xididdada waxaa lagu cadaadiyey, taas, iyada oo leh hawada la'aan, wuxuu ka xanaajiyaa muuqaalka kore ee fungus iyo kallana.
Ma taqaanaa? Muhiimada dhaqankan waxaa lagu muujiyay xaqiiqda ah in guddi gaar ah oo Qaramada Midoobey loo yaqaano 2008 ee sannadka baradho.
Waxaan ogaanay in dabaylo goor dambe ee baradho ah, uu helay sharaxaad ka mid ah cudurkan iyo hoggaamiyey hababka ugu muhiimsan ee daaweynta la xidhiidha. Waxaan rajeynaynaa in aqoontan ay faa'iido u tahay akhristeyaasheena. Nasiib wacan sariiraha!